Inverquark ubuchwepheshe lakhiwa Aquark Electric Ltd. Ngemva kweminyaka yentuthuko kanye nocwaningo, e-2017, i-Inverquark ubuchwepheshe esiyingqayizivele wethulwa ngempumelelo ukuze bahlanganisa umkhakha. Kuyinto buthule iningi & kwagezi inverter pool Ukushisa isixazululo. izimfanelo zayo eziyinhloko stepless DC inverter, eyingqayizivele uhlelo inverter pool ukulawula nokuvikelwa ezihlakaniphile.
ubuchwepheshe core Inverquark sika stepless DC inverter. It usebenzisa stepless inverter compressor futhi DC brushless fan motor. Ijubane kungase kushintshwe eyodwa kuya kwangu ngomunye hertz nokukodwa round ngomunye round, esinikela emangalisayo kwagezi ukusebenza futhi kuthule kakhulu.
Abahlukile inverter Control System
uhlelo lokulawula Inverquark sika ngokukhethekile eyenzelwe pool bafudumale. Kungaba ulungise Ukushisa umthamo ngokunembile ngokuvumelana ezahlukene Ukushisa ukulahlekelwa ngenkathi pool. Ifilosofi design ingafika Ukushisa okusheshayo nge high speed ekuqaleni kwesizini, futhi kangcono kwegezi lonke sizini isivinini esiphansi.
Inverquark zingazivumelanisa voltage ububanzi futhi ulungisa uhlelo zisesimweni ezahlukene ezinzima. Ngokwesibonelo, uma kukhona ugesi isiqongo noma ukupholisa abampofu, isistimu ingakwazi ukubambezela ngokukhalipha umsebenzi ukhululekile. Ngakho, iletha baphila isikhathi eside uma kuka yendabuko kokuvula / ukuvala impompi yokushisa.